यी तिन कथा जसले तपाइको जीवनमै परिवर्तन गरिदिने छ - Muldhar Post
यी तिन कथा जसले तपाइको जीवनमै परिवर्तन गरिदिने छ
पत्रपत्रिका खबर २०७६, १७ पुष बिहीबार
690 पटक हेरिएको
संसारका सबैभन्दा प्रभावशाली उद्यमीहरुको नाम लिनुपर्दा, त्यसमा अरु कुनै नाम भए पनि नभए पनि एउटा नाम अवश्य लिइन्छ । त्यो नाम हो स्टिव जब्स । एप्प्ाल कम्पनीका फाउन्डर यी अमेरिकीलाई संसारले केवल एक सफल उद्यमी, आविष्कारक र व्यवसायीको रुपमा मात्र नभएर संसारकै अग्रणी प्रेरक र स्पिकरको रुपमा पनि चिनिन्छ । आज हामी तपाईंसँग स्टिभ जब्सको सबैभन्दा उत्कृष्ट अनुभवहरुलाई प्रस्तुत गर्दैछौं । उनले यो स्पिच स्टिभ जब्स कन्भोकेसन, स्टानफोर्डमा दिएका हुन् । उनी भन्छन् –
मेरी आमा एक जवान, अविवाहित स्नातक विद्यार्थी थिइन् र उनी मलाई कोही अरुलाई नै पाल्नका लागि दिन चाहन्थिन् । तर, कुनै कलेज ग्राजुएटले नै मलाई पालोस् भन्ने उनको चाहना थियो । सबै कुरा मिलेको थियो । म एक जना वकिल र उनकी श्रीमतीद्वारा पालिने भएको थिए । अचानका ती दम्पतीले आफ्नो विचार परिर्वतन गरेर छोरा होइन छोरीलाई पाल्ने निर्णय गरे । त्यसैले आधा रातमा मेरो अभिभावक, जो बच्चाका पर्खाइका लागि लाइनमा थिए । उनीहरुलाई फोन गरेर एक जना केटा बच्चा छ, के तपाईंंहरु उसलाई पाल्न चाहनुहुन्छ ? भनेर सोधियो । उनीहरुले पनि तुरुन्त हुन्छ भने ।
मैले कलेज छाडिसकेको थिएँ । त्यसैले मैले साधारण कक्षाहरुमा सहभागी हुनु आवश्यक थिएन । मैले क्यालिग्राफिको कक्षामा सहभागी हुने र राम्रोसँग सिक्छु भन्ने निर्णय गरेँ । मैले सेरिफ र स्यान सेरिफ टाइप फेसको बारेमा सिकेँ । भिन्दा-भिन्दै अक्षरहरुको संयोजनका बीचमा कुनै राम्रो टाइपोग्राफीलाई के चिजले राम्रा बनाउन सक्छन् भन्ने कुरा पनि सिकेँ । यो धेरै सुन्दर थियो, यति धेरै कलात्मक थियो जसलाई विज्ञानद्वारा क्याप्चर गर्न सकिदैंन थियो र मलाई त्यो अति नै राम्रो लागेको थियो ।
यी कुराहरुको प्रयोग कहिले म आफ्नो जीवनमा गर्छु भन्ने त्यो समयमा अलिकति पनि अपेक्षा समेत गरेको थिइन । तर, जब हामी दश वर्षपछि पहिलो म्याकन्टोस कम्प्यूटर बनाइरहेका थियौं । तब मैले त्यसलाई म्याकमा डिजाइन गरिदिएँ । त्यसपछि म्याक सुन्दर टाइपोग्राफी युक्त विश्वकै पहिलो कम्प्युटर बन्न पुग्यो । यदि मैले कलेजबाट ड्रप-आउट नगरेको भए म्याकमा कहिले पनि मल्टिपल-टाइपफेस अथवा आफ्नो पेश अनुसारको फण्डहरु हुने थिएनन् ।
वास्तवमा, जब म कलेजमा थिएँ । त्यो बेला भविष्यलाई हेरेर ती डट्सहरुलाई कनेक्ट गर्नु सम्भव थियो । तर, दश वर्षपछि जब म पछाडि फर्किएर हेर्छु । सबै कुरा बिल्कुलै स्पष्ट देखिन्छ । तपाईंं कहिले पनि भविष्यलाई हेरेर डट्स कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्न । तपाईंं केवल बिगतलाई हेरेर नै डट्स कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले तपाईंंले विश्वास गर्नुपर्छ । अहिले जे भइरहेको छ, त्यो अगाडि गएर कुनै नै कुनै तरिकाले तपाईंंको भविष्यसँग जोडिने छ । तपाईंंलाई कुन न कुनै चिजमा विश्वास गर्नै पर्छ-आफ्नो भाग्यमा, आफ्नो जिन्दगीमा अथवा आफ्नो कर्ममा । कुनै न कुनै चिजमा विश्वास गर्नैपर्छ । किनभने यी कुराहरुमा विश्वास गर्नु कि अगाडि गएर डट्सकहरु कनेक्ट हुनेछन् । तपाईंंले आफ्नो मनको आवाज सुन्ने हिम्मत हुनेछ….त्यो बेला पनि तपाईंं बिल्कुल अलग बाटोमा हिंडिरहनु भएको हुनेछ । र, त्यसले फरक पार्नेछ ।
मेरो दोस्रो कथा, लभ एण्ड लस (प्रेम र घाटा) का बारेमा छ । म जुन चिजलाई चाहन्थेँ, त्यो मैले चाँडै हाँसिल गर्दथेँ । बोज र मैले आफ्ना अभिभावकको ग्यारेजबाट एप्पल सुरु गर्ने बेलामा मेरो उमेर २० वर्षको थियो । हामीले निकै मेहनत गर्‍यौं र १० वर्षमा एप्पललाई दुई जना व्यक्तिबाट बढाएर दुई बिलियन र ४ हजार मानिसहरुको कम्पनीको बनायौं । हामीले एक वर्षअघि मात्र आफ्नो स्पष्ट कीर्ति म्याकिन्तोष रिलिज गर्‍यौं । म तीस वर्षको भएको थिएँ र मलाई कम्पनीले फायर गरिदिएको थियो । तपाईंंले आफैंले बनाउनु भएको कम्पनीबाट कसरी निस्कासित हुन सक्नुहुन्छ ? जसै-जसै कम्पनी बढ्दै थियो । हामीले एक जना त्यस्ता प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई भर्ना गर्‍यौं । जोसँग मिलेर कम्पनीलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने मेरो सोचाई थियो । पहिलो एक वर्ष त सबै राम्रै भयो ।
यदि तपाईंंले अहिलेसम्म त्यो काम पाउनु भएको छैन भने पनि तपाईंं नरोकिनुहोस्, त्यो कामलाई खोजिरहनुहोस् । जस्तो कि मनसँग जोडिएको हरेक चिजमा हुन्छ, त्यो जब तपाईंंले फेला पार्नु हुन्छ, आफैं थाहा हुन्छ । जस्तो एउटा राम्रो सम्बन्धमा पनि हुन्छ । सम्बन्ध पनि समय सँग-सँगै राम्रो हुँदैजान्छ । त्यसैले खोजी जारी राख्नुहोस्, नरोकिनुहोस् । अनलाइन खबरबाट ।